” Saxaafaddu waa Rukunka Afraad (the Fourth Pillar) …” Qalinkii:Ali Xaruuri. |
” Saxaafaddu waa Rukunka Afraad (the Fourth Pillar) …” Qalinkii:Ali Xaruuri.
Saxaafaddu waa Rukunka Afraad (the Fourth Pillar) ee Dawadnimada waxayna kaalin lagama maarmaan ah ka qaatadaa kobcinta iyo kor u qaadidda garaadka Bulshada. Warbaahintu waa Muraayadda bulshada waxa looga baahan yahay muwaadinimo (patriotism) iyo Daacadnimo (loyalty) ….. By: Ali Xaruuri.
Saxaafaddu waa Rukunka Afraad (the Fourth Pillar) ee Dawadnimada ee soo raaca Waaxyaha Garsoorka, Fulinta iyo Xeer-dejinta. Xorriyadda saxaafaddu waa mid guud ahaan la isku waafaqsan yahay in ay tahay Tiir-dhexaadka geeddi socodka hannaanka Dimuqraadiyadda.
Wakhtigan casriga ah saxaafaddu waxay ka mid noqotay daruuriyaadka maalin laha ah (daily need) Maahmaah Somaliyeed baa tidhaa “WAR BAA UGU GAAJO BADAN”. Haddii aanay saxaafadi jirinna Shacbigu ka ma uu warqabeen qorshaha iyo waxqabadka Dawladda.
Noocyadeeda kala duwan ee Warbaahinta waxa loogu tala galay inuu gaadho (daawadaan, akhristaan ama dhageystaan) Bulsho aad tiro badan.
Saxaafaddu waxay kaalin lagama maarmaan ah ka qaatadaa kobcinta iyo kor u qaadidda garaadka Bulshada, waxayna door aad u sarreeya ka ciyaartaa qaabeynta ama jiheynta fikirka Dadweynaha.
Mas’uuliyadda iyo mudnaanta kowaad waa inay ilaaliso kuna dadaasho u adeegidda danta bulshada. Waa inay bulshada ka haqab tiraan dhan walba iyo heer walba oo u soo gudbiyaan macluumaad ku filan intii ay heli karayaan.
Warbaahintu waa xirfad u baahan aqoon, tababar iyo khibrad gaar ah. Saxaafadi ma horumari karto, hanaqaadna ma noqon karto haddii aanay si buuxda u fahamsanayn hawsha ay ummadda u hayso iyo mas’uuliyadda ka saaran bulshada. Waa in ay ku dadaalaan Kasbashada kalsoonida (confidence building) shacabka taas oo ay ku iman karto sare u qaadidda Tayada
(promoting better Quality) iyo ilaalinta Sumcadda, sidaa awgeed:-
* Waa muhiim qaabka saxaafaddu ay wararka u soo ururiyaan iyo habka
ay u tebiso (gudbiso ama daabacdo)
* Waxa mudnaan gaar ah in la siiyo ah xulashada iyo xaqiijinta wararka iyo xigashada
ilo-wareed lagu kalsoon yahay (reliable source)
* Waajib bay ku tahay inay u soo gudbiyaan bulshada war sugan oo xaqiiqo Ku Dhisan
oo leh markhaati iyo caddeymo taageeraya
* Waxa looga baahan yahay inay macaamiisha u soo bandhigaan warar tifaftiran oo
miisaaman lagana fogaado Buun-buunin , malo-awaal iyo warar ku-tidhi-ku-teen ah
oo Sal iyo Raadtoona aan lahayn
* Waa xilka saxafaadda in laga taxadara oo la kala sooco Warka , faalada iyo Ra’yi
* Waa in ay ka baaraan degtaa oo ay kala shaandheysaa Wararka
# maxaa xun maxaa san?
# maxaa habboon maxaan habboonayn
oo aan Bulshada la jaan qaadi karin?
* Waa inay Ku baraarugsanaadaan saamaynta Taban
ama Togan(negatively) ee ficilada warbaahintu ku yeelan karto.
Sufuxigu waa in uu dhawro ansahaxa iyo mabaadii’da aasaasiga ah ee warbaahinta. waa in saxaafaddu noqotaa dhexdhexaad aan u lug xidhnayn koox, xisbi ama beel-toona. balse ay marwalba taageerto uun wixii sax ah.
waana inay bulshada ugu adeegto si siman oo dheelli tiran, fursadna loo siiyo Muwaadiinta in ay maqlaan afkaarta kala duwan.
Saxaafaddu waxa waajib ku ah in ay muwaadiniinta siiyaan wararka ku saabsan waxa dalka ka socda (si ay xog-ogaal ugu noqdaan dib-u-dhaciisa iyo/ama horumarkiisa) taasoo ah nooc la xisaabtan waxqabadka dawladda ah. Waa in ay doc kasta soo bandhigtaa mawduuca si dhegaystayaashu ay uga cabbir qaataan go’aan qaadashada ra’yigooda .
Run ahaantii, Duruufo adag ayey saxaafaddu ku soo shaqeysay oo ay ka soo gudubtay. Nasiib wanaag waxa ay maanta haysataan Dastuur u dammaana qaadaya xorriyadeeda, sidaa
daraadeed ma aha in ay haattan u nuglaato handadaad cidna u habradto, inta ay ku taagan tahay xaqa iyo xuduudda uu u jideeyey xeerku.
Xaqa waxa la socda xil culus iyo waajibaad badan, oo Saxaafadda Xorta ahi ma aha mid XEER iyo XAKAMA aan lahayn ee waa inay yeelataa mabaa’dii iyo xuduud cad.
Suxufigu waa inuu lahaado aqoon durugsan oo uu ku kala garto waxa u dhexeeya Xorriyadda iyo Xeyndaabka aan laga gudbi karin. Waana in uu dhugmo u yeesho Xaqa baahinta warka iyo dhawrsanaanta XOGTA (SIRTA) QARANKA.
Warbaahintu waa Muraayadda bulshada waxa looga baahan yahay muwaadinimo (patriotism) iyo Daacadnimo (loyalty).Haddii ay saxaafaddu marinkeeda seegto waa lama huraan in la soo faragelilyo si tubta toosan loogu soo dabbaalo. Suxufigu waa in uu had iyo jeer maanka ku hayaa in uu qaadayo mas’uuliyadda natiijada ka dhalatay warkiisa oo uu wajihi doono tallaabo anshax-marin ah oo la xidhiidha falka uu ku kacay.
Doorka warbaahintu waa mid muuqata oo wax ku ool ah. Saxaafaddu waxay jishaa hay’ad
ilaalisa maslaxadda dadweynaha, waxayna gacan ka geysataa la dagaalanka Musuqmaasuqa , Laaluushka, Qaraabakiilka, Eexda, Qof jeclaysiga.
Saxaafadda Xilkaska ahi waxay Shacbiga ka heshaa taageero lixaad leh sidii ay uga hortegi lahayd Caddaalad Darrada, Cabbudhinta, Xumaanta iyo Sinnaan La’aanta Bulshada. Dhalliisha wax-toosinta ahi (constructive criticism) wax ay mudan tahay in marwalba la soo dhaweeyo oo la bogaadiyo.
Geesta kale, murti baa tidhaa “Ubaxuba qodax buu leeyahay” ( roses have thrones too), taas oo ujeedadeedu tahay wax walba nusqaan ama dhaliishiisa ayuu wattaa. Sidoo kalena
Warbaahinta qudh-dheedu kama madhna dhaliisha (ma dhalliil la’a). Fejignaan la’aanta saxaafaddu waxay sababi kartaa in ay Xammaasad iyo Fidno ka kiciso bulshada dhexdeeda, taas oo keeni karta iska-horkeen iyo kala-fogeynta Ummadda.
Beryahan dambe, Dadweynihii waxay la dhakko-faarsan yihiin ( fajacsan) waxa ku dhacay haybaddii Saxaafadda qaarkeed oo maanta gaadhay meeqaam aad u liita oo la kala garan la’yahay Fadhi-ku-dirirkii iyo Saxaafaddii la rabay inay dadweynaha hagto. Sidaa awgeed, waa in ay hab-dhaqankeeda wax ka bedeshaa oo ay Ummadda u tudhaa oo wixii wax u dhimaya
Qaranka ay ka dheeraataa.
Waa muhiim in Warbaahintu badka soo dhigto maamul xumada, musuqmaasuqa iyo xumaanta jirta, hase yeeshee waxa taas barbar socota oo iyana jira waxyaabo badan oo fiican oo lagu tallaabsaday, sidaa awgeed waa in la qiro oo aan daah lagu qarinin horumarka iyo guulaha la gaadhay.
= Ka Dayrinta ( pessimists ) badani waxay Bulshada ku ridda qalbi jab,
= yididiilada iyo sheegidda wanaaggu (optimists) waxay Muwaadinka u furtaa daaqadda rajada iyo horumarka.
Bulshada isku duuban ayaa wajihi karta dhib kasta oo la soo derista taasaana lagu gaadhaa guulo wax ku ool ah iyo dhismo qaran horumarsan.
Saxaafadda waa inay kaalin mug iyo miisa an leh ka qaadataa sidii bulshada ay isku soo jiiddi lahayd, kana dhex abuuranto Midnimo, Wa dajir iyo Kalgacal (harmony), si aynu u dhisno Qaran laga cidhibtiray jahliga, gaajada, cudurka iyo Qabyaaladda.
Dhisa qaranka dheelliga ka jira dhidibbada u taaga – Sharafteenna wixii dhuminayaan dhaafa leeyahaye